တကယ်ဆို ဒီလိုအချိန်မှာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ဆုတွေ ရရှိနေရမှာဖြစ်တဲ့ ပြည်သူ့မင်းသမီး အိန္ဒြာကျော်ဇင် – Shwe Likes
ပြည်သူချစ် သရုပ်ဆောင် အိန္ဒြာကျော်ဇင် ဟာဆိုရင် အောင်မြင် မှုတွေများ စွာရရှိနေတဲ့ သူတစ်ဦးဖြစ် ပါတ ယ်။ သူမဟာ မြန်မာမှာသာမက ကမ္ဘာမှာပါ အောင်ြ မင်မှုေ တွကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နေ တဲ့သူြ ဖစ်ပါတယ်။
သူမရရှိ ခဲ့တဲ့ဆုေ တွက ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ အချစ်လေပြေ ဇာတ်ကားနှင့် အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးဇာ တ်ဆောင်ဆု ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာဆိုရင် အတိတ်၏ အရိပ်ဇာတ် ကားနှင့် Asian Academy Awards ကနေရော Golden Rooster Awards ကနေရော အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင် ဆုကို ရရှိခဲ့ပြန်ပါတ ယ်။ အဲဒါတင်မကေ သးပါဘူး။ သူမဟာ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိလည်း ဆုတွေအများကြီးရရှိခဲ့တဲ့ သူဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၁ခုနှစ် သူမ အကျဉ်းထောင် ထဲရောက်နေချိန်မှာေ တာင် What Happened to the Wolf? ဇာတ်ကားနဲ့ Oldenburg International Film Festival ကချီးမြှင့်တဲ့ Seymour Cassel Award For Best Performance ဆုကိုရ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ပြည်သူ့မင်းသမီး အိန္ဒြာကျော် ဇင်ဟာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရပ်တည်ရင်း ၅၀၅ က ပုဒ်မဖြင့် ဖမ်းဆီးအကျ ဉ်းကျခံထား ရတဲ့သူဖြစ်ပါတ ယ်။ သူမသာ အပြင်မှာရှိနေခဲ့ရင် လည်း နောက်ထပ် အောင်မြင်မှုတွေ အများကြီး ယူလာနိုင်ခဲ့မှာ အသေအ ချာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒြာကျော်ဇင် ဟာ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆော င်ပြေတီ ဦးနှင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်ခဲ့ကြပြီး သားလေးတစ်ဦး သမီးလေးတစ်ဦး ရရှိပိုင်ဆို င်ထားပါတယ်။ ပျော်ရွှင်စရာနဲ့အရာ ရာပြည့်စုံေ နတဲ့ မိသားစုေ လး ကွဲကွာသွားခဲ့တာ အခုဆိုရင် ၁ နှစ်နီးပါးတော င်ပြည့်ေ တာ့မှာပဲဖြစ်ပါ တယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုလေး အမြန်ဆုံး ပြန်လ ည်စုစည်းနိုင်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေလည်း ထပ်မံရရှိနိုင်ဖို့ ဆုတောင်းေ ပးလိုက်ပါတယ်။ Credit;
ျပည္သူခ်စ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ ဟာဆိုရင္ ေအာင္ျမင္ မႈေတြမ်ား စြာရရွိေနတဲ့ သူတစ္ဦးျဖစ္ ပါတ ယ္။ သူမဟာ ျမန္မာမွာသာမက ကမၻာမွာပါ ေအာင္ျ မင္မႈေ တြကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ေန တဲ့သူျ ဖစ္ပါတယ္။
သူမရရွိ ခဲ့တဲ့ဆုေ တြက ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ အခ်စ္ေလေၿပ ဇာတ္ကားႏွင့္ အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသမီးဇာ တ္ေဆာင္ဆု ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ အတိတ္၏ အရိပ္ဇာတ္ ကားႏွင့္ Asian Academy Awards ကေနေရာ Golden Rooster Awards ကေနေရာ အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသမီး ဇာတ္ေဆာင္ ဆုကို ရရွိခဲ့ျပန္ပါတ ယ္။ အဲဒါတင္မေက သးပါဘူး။ သူမဟာ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိလည္း ဆုေတြအမ်ားႀကီးရရွိခဲ့တဲ့ သူျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၂၁ခုႏွစ္ သူမ အက်ဥ္းေထာင္ ထဲေရာက္ေနခ်ိန္မွာေ တာင္ What Happened to the Wolf? ဇာတ္ကားနဲ႔ Oldenburg International Film Festival ကခ်ီးျမႇင့္တဲ့ Seymour Cassel Award For Best Performance ဆုကိုရ ရွိခဲ့ပါတယ္။
ျပည္သူ႔မင္းသမီး အိျႏၵာေက်ာ္ ဇင္ဟာ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ရပ္တည္ရင္း ၅၀၅ က ပုဒ္မျဖင့္ ဖမ္းဆီးအက် ဥ္းက်ခံထား ရတဲ့သူျဖစ္ပါတ ယ္။ သူမသာ အျပင္မွာရွိေနခဲ့ရင္ လည္း ေနာက္ထပ္ ေအာင္ျမင္မႈေတြ အမ်ားႀကီး ယူလာနိုင္ခဲ့မွာ အေသအ ခ်ာပဲျဖစ္ပါတယ္။
အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ ဟာ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာ င္ေျပတီ ဦးႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ လက္ထပ္ခဲ့ၾကၿပီး သားေလးတစ္ဦး သမီးေလးတစ္ဦး ရရွိပိုင္ဆို င္ထားပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္စရာနဲ႔အရာ ရာျပည့္စုံေ နတဲ့ မိသားစုေ လး ကြဲကြာသြားခဲ့တာ အခုဆိုရင္ ၁ ႏွစ္နီးပါးေတာ င္ျပည့္ေ တာ့မွာပဲျဖစ္ပါ တယ္။ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ မိသားစုေလး အျမန္ဆုံး ျပန္လ ည္စုစည္းနိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြလည္း ထပ္မံရရွိနိုင္ဖို႔ ဆုေတာင္းေ ပးလိုက္ပါတယ္။ Credit;
သင်္ကြန်အကြိုအနေနဲ့ အဘိုးအဘွားတွေကို သူမစုထားတဲ့မုန့်ဖိုးလေးတွေနဲ့ အလှူလေးလုပ်ခဲ့တဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင် သွန်းမြတ်ကြယ်စင်